module စက်တပ် လေးပုံတပုံ အလှည့် actuator ပေးသွင်း နှင့် ထုတ်လုပ်သူ - တရုတ်နိုင်ငံ အလုပ်ရုံ - AOX
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > လျှပ်စစ် Actuator > လေးပုံတပုံ အလှည့် လျှပ်စစ် Actuator > module စက်တပ် လေးပုံတပုံ အလှည့် actuator
module စက်တပ် လေးပုံတပုံ အလှည့် actuator
AOX-မေး စီးရီး ပြောင်းလဲပစ် စက်တပ် လေးပုံတပုံ အလှည့် actuator ဖြစ် အထူး ဒီဇိုင်းရေးဆွဲ ဘို့ ပြောင်းလဲပစ် နှင့် Open-နီးစပ် တာဝန် တွင် ဖြစ်စဉ် နည်းပညာ။ AOX-မေး စီးရီး ပြောင်းလဲပစ် စက်တပ် လေးပုံတပုံ အလှည့် actuator အစေခံ အားလုံး ကျော်လွန် အဆိုပါ ကမ္ဘာကြီး, တွင်cludတွင်g ဥရောပ, အဆိုပါ အမေရိကတိုက်, ICAO, သြစတြေးလျ, အာဖရိက, အာရှ, အဆိုပါ အလယ်တန်း အရှေ့ နှင့် Souအဆိုပါast အာရှ နိုင်ငံပေါင်း။ ဒါဟာ ဖြစ် ကျယ်ပြန့် အသုံးပြုခံ့ တွင် ရေ ကုသမှု, heatတွင်g, ရေနံ, ဓါတုဗေဒ တွင်dustry, အီလက်ထရွန်းနစ်, အလင်း တွင်dustry, အစားအစာ, medicတွင်e, အထည်အလိပ်, စက္ကူ makတွင်g, ရေအားလျှပ်စစ်, သင်္ဘောများ, smeltတွင်g, အသစ်က အင်အား နှင့် oအဆိုပါr လယ်ကွင်း။ တွင် ထို့အပြင်, က ရှိပါတယ် establဖြစ်hed အလွန် ဖော်ရွေ ဆက်ဆံရေး wကh များသော ဉစ္စာဓန 500 ကုမ္ပဏီများသည်။
စက်တပ်လေးပုံတပုံအလှည့် actuator ပြောင်းလဲပစ် AOX-မေးစီးရီး 2. Window: Polycarbonate င်းဒိုး built-in O-ကွင်း, fixed သတ္တုဂလင်း, အဂလင်းကိုစောငျ့ရှောကျဖို့လွယ်ကူရေ, ကာကွယ်တားဆီးဖို့နှစ်ခုရေနုတ်မြောင်းလမ်းကြောင်းများနှင့်အတူကြွလာ။
(AOX-Q-005/008/010 မှလွဲ. ) မော်တော်လေးပုံတပုံအလှည့် actuator ပြောင်းလဲပစ် AOX-မေးစီးရီး 3. torque switches များ
ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီ 20 ကျော် years.The အဓိကအပြောင်းအလဲနဲ့ပစ္စည်းကိရိယာများများအတွက်ပြောင်းလဲပစ်မော်တော်လေးပုံတပုံအလှည့် actuator စက်စင်တာတို့ပါဝင်သည်, CNC တွင်ခုံ, CNC ကြိတ်စက်, CNC တူးဖော်စက်, CNC တူးဖော်စက် AOX-မေးစီးရီးများထုတ်လုပ်ရာတွင်ပါဝင်နေခဲ့ပြီး AOX ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကြံ့ကြံ့ခိုင်ရပ်တည် အဆင့်မြင့်ကိရိယာများအတွက်အရည်အသွေးကောင်းအာမခံထားသည့်ကုန်ထုတ်လုပ်မှုဖြစ်စဉ်ကိုအပေါ်တင်းကျပ်သောထိန်းချုပ်မှု, နိုင်ပါတယ်။
မော်တော်လေးပုံတပုံအလှည့် actuator ပြောင်းလဲပစ် AOX-မေးစီးရီး၏ installation, ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုများနှင့်သိုလှောင်မှု
2 လျှပ်စစ် actuator ၏လျှပ်စစ်တပ်ဆင်ခြင်းလျှပ်စစ်တပ်ဆင်ခြင်း၏သက်ဆိုင်ရာဆောက်လုပ်ရေးလိုအပ်ချက်တွေနဲ့အညီဆောင်ရွက်ရကြလိမ့်မည်ကို၎င်း, ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်-အထောက်အထားထုတ်ကုန် Explosive အတွက်လျှပ်စစ်ပစ္စည်းကိရိယာများအတွက်âတပ်ဆင်ခြင်းအသေးစိတ်ဖော်ပြချက်၏လိုအပ်ချက်များနှင့်အညီဆောင်ရွက်ရကြလိမ့်မည် အန္တရာယ်ရှိသောLocationsâ။
3 လျှပ်စစ် actuators မကြာခဏထိန်းသိမ်းထားရပါမည်။ မြင့်မားသောတုန်ခါမှုနှင့်အတူနေရာ, အမြဲ connectors ကောင်းသောအဆက်အသွယ်နှင့်သော့ခတ်ယုံကြည်စိတ်ချရသောရှိမရှိရှိမရှိ, အစွဲစေချောင်ရှိမရှိစစ်ဆေးပါ။
မေး: သင်၏စက်ရုံမော်တော်လေးပုံတပုံအလှည့် actuator (သို့မဟုတ်အထုပ်) ပြောင်းလဲပစ်သည့် AOX-မေးစီးရီးပေါ်မှာငါတို့အမှတ်တံဆိပ် print ထုတ်နိုင်ပါသလား?
hot Tags:: module စက်တပ် လေးပုံတပုံ အလှည့် actuator, တရုတ်, ထုတ်လုပ်သူ, ပေးသွင်း, စက်ရုံ, အရည်အသွေး, advanced, Classy, နောက်ဆုံးပေါ်